Wamkelekile eNatvisa, apho sizinikezele khona ekuboneleleni ngeenkonzo ezilungileyo kunye ezingenasidingo kuzo zonke iimfuno zakho ezinxulumene ne-visa. Siyayiqonda indlela ekuxinezeleka ngayo yonke ingxaki yokufumana i-visa yakho yelizwe elithile. Kunokuba kungabikho phepha elingaphelelanga, okanye ungothuka kuyo yonke inkqubo. Nokuba yeyiphi na imibuzo yakho, sibeka yonke imibuzo yakho enxulumene ne-visa ukuze uphumle.
Siyazi ukuba ujonge njani ekuqaliseni uhambo lwamaphupha akho, kodwa amathemba aza ngokukhawuleza ebaleka xa inkqubo ye-visa iyema. Zininzi izinto ezinokuba negalelo kule meko ingathandekiyo. Kulapho singena khona. ENatvisa, sizama ukubonelela ngeyona nkonzo ibalaseleyo yabathengi ukuze uqalise uhambo lwakho ekudala lulindelwe ngexesha.
Sithatha uxanduva olupheleleyo lokungenisa isicelo sakho se-visa ngaphandle kwemicimbi ukuze ube kuhambo lwakho akukho xesha. Ukuqala ngo-2014, siyaqinisekisa ukuzisa izinto elubala, ukoneliseka kwabathengi, kunye nenkxaso ye-24/7 kwi-intanethi kwiinkonzo zethu. Ngolwazi olukhulu kunye nobuchule kushishino lokuhamba, siyaqinisekisa ukwenza inkqubo yakho yokuhambisa i-visa iphaphe umoya.
Simi eColorado kwaye sijongana nokwenza izicelo ze-visa ngokukuko nangokusekuhleni. Sijongene nokuhambisa izicelo ze-visa kwihlabathi liphela kwaye sinikeze ngolwazi oluchanekileyo malunga nokufumana i-visa efunekayo. Eyona njongo yethu kukubonelela ngamava abathengi ababalaseleyo kuzo zombini iinkqubo zokuvavanywa kwee-visa kunye ne-visa.
I-Natvisa ayakhiwanga ngobusuku; kuthathe iminyaka yokuziqhelanisa kunye nophando kunye neqela elinomdla labasebenzi ukuba basifikise kwindawo yethu ekhokelayo kwintengiso.
Besisebenza kule femu iminyaka emininzi, kwaye nangona sihambile siguqulwa ngamagama amaninzi, iinkonzo zethu, nangona kunjalo, zahlukile. Ukusukela ngo-2014, senze ukuba sizimisele ukwenza lula inkqubo yokufumana ii-visa zokundwendwela kwaye siye saqhubeka nendlela yokuphucula nokwenza iinkonzo zethu.
Ukuba ufuna ukuhamba kwaye unemicimbi yokuba i-visa yakho ihlelwe, shiya zonke iingxaki zakho e-Natvisa. Siza kuqwalasela izicelo zakho ze-Visa ngaphandle kwengxaki kwaye sikunike ulwazi olwaneleyo malunga nemibuzo yakho yenkqubo ye-visa kwimeko apho singakwazi ukwenza i-visa yendawo ethile.
Masijonge ukuba kutheni kufuneka ukhethe iinkonzo zethu:
Siyabonakala ekusetyenzweni kwethu, kwaye ukoneliseka kwabathengi yinto ephambili yethu.
Sisebenzisana namanye amazwe kwaye siya kuqwalasela izicelo zakho ze-visa zamazwe ahlukeneyo kwihlabathi.
Inkqubo yethu yewebhu kwi-intanethi inokusebenziseka lula, kwaye awuyi kuziva ulahlekile okanye udidekile nje wakufumana iinkonzo zethu.
Oko sikwishishini lokundwendwela iminyaka emininzi, sinamava amakhulu okufumana iimvume zokuhamba zilungele ngendlela engxamisekileyo.
Ukhuseleko lubaluleke kakhulu e-Natvisa
Siyaqonda ukuba abantu baziva bebaxa-mbini xa bedlulisela ulwazi lwabo lomntu kwi-intanethi. Qiniseka, njengoko sizithathela ingqalelo ukuba sinike indawo ekhuselekileyo nenokhuseleko olukwi-intanethi.
Ulwazi olucacileyo lomthengi wethu kunye nedatha zigcinwa kumaziko edatha yehlabathi-ngelixa kusetyenzwa ubuchwephesha obuphambili kunye neendlela zokugcina. Ke, ulwazi lwakho lwekhadi letyala kunye neenkcukacha zikhuselekile ngokupheleleyo kuthi.
Siqhayisa ngexabiso eliphezulu lokuvunywa
Nje ukuba usikhethele inkqubo yakho yokulungisa i-visa, ungaqiniseka kuba yeyona nto ifanelekileyo kwintengiso yezinto esizenzayo. Ingcali enamava kakhulu iza kujonga isicelo ngasinye se-visa kunye namaxwebhu owangenisileyo. Nje ukuba ziphinde ziqwalaselwe, isicelo siyakuthunyelwa kurhulumente oqhubayo.
Siqinisekisa ukuba ifom nganye kunye noxwebhu ngolungelelwano kwaye ziyahlangabezana nazo zonke iimfuno. Ukuba abasebenzi bethu bafumana nayiphi na impazamo okanye impazamo, baya kunxibelelana nawe ukuba benze izilungiso ezifanelekileyo. Ngokulandela le nkqubo ineenkcukacha, akukho gumbi lempazamo okanye elaliwe. Uya kukhululeka ekubeni wazi ukuba zonke izicelo ze-visa ezenziwa kwiwebhusayithi zethu zivunyiwe.
Inkonzo yoMthengi efanelekileyo
Siyaqonda ukuba yonke inkqubo inothusa abasebenzisi abaninzi, kwaye banokuzifumana belahlekile kumanqanaba athile esicelo sabo.
Kungenxa yeso sizathu le nto siqhayisa ngeqela elifanelekileyo nelisebenzayo lenkxaso yabathengi elinoxanduva lokuphendula yonke imibuzo efanelekileyo, imibuzo, kunye nezicelo. Iiarhente zethu ezinobuhlobo nezazi kakuhle zihlala zikho ukuze zilungele isicelo somthengi.
SizakuKhathalela zonke iimfuno zakho zeVisa yokuqhubekeka
Nokuba ungathanda ukuya phi, ungayishiya na inkqubo yakho yokufumana i-visa. Siza kuqinisekisa ukuba ufumana amava angenazinkathazo ngeenkonzo ezilungileyo zabathengi]